ရေးသားသူ juno at Thursday, December 27, 20122comments:
ရေးသားသူ poemflower at Friday, November 30, 20122comments:
အကြောင်းနှင့်ကင်းပြီး ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် မရှိသော ဤလောကကြီးတွင် ပြုလုပ် စီမံခြင်း ဟူသော ပေးဆပ်ခြင်း မရှိဘဲ မည်သည့် ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းမျိုးမှ မရှိနိုင်ချေ ။ အကြောင်းရှိမှ အကျိုးရှိရသလို အပေးရှိမှ ရယူခြင်း သည် ဖြစ်ပေါ်လာရချေသည်။ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်က လက်ညှိုးညွှန်လိုက် သည်နှင့် ရွှေအိုးကြီး ဘွားခနဲ ပေါ်လာသည့် အဖြစ်မျိုး ၊ သရက်မျိုးစေ့ကို စိုက်ပျိုးထားလျက် နှင့် ထို သရက်ပင် မှ လိမ္မော်သီး သီးလာသည့် အဖြစ်မျိုးသည် ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင် ယုံတမ်းစကားများသာတွင် သာ တွေ့နိုင်ပါသည်။
စင်စစ်မှု အပေးရှိမှ ရယူနိုင်မှု၊ အသွားရှိမှ အလာရှိမှုတို့သည် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်နေသည့် လောက၏ နိယာမစုံတွဲများ ဖြစ်လေသည် ။ ဤနိယာမသဘောကို လွန်ဆန်ပြီး အပေးမရှိဘဲ ရယူလိုခြင်း၊ အပင်မစိုက်ဘဲ အသီးစားလိုခြင်းသည် အလွန်တရာ မှားယွင်းသော ၀ိသမလောဘ ဦးစီးသည့် တစ်ဖက်သက် စိတ်ဆန္ဒ တစ်ခု သာ ဖြစ်ချေသည်။
ဤလောကသည် လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံ ပေါင်းသင်းပြီး တူညီသော ဆန္ဒ၊ ရင်းနှီးချစ်ကြည်မှုတို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ် ဖြစ်ပေရာ ထိုလူ့လောက အဖွဲ့အစည်းကြီး မတိမ်းမစောင်း ၊ မပျက် မယွင်းသွားအောင် " အပေးအယူ " ဖြစ်စဉ်ကြီး က ထိန်းချုပ်ပေးထား၍သာ ဤလူ့လောက သည် ဤမျှ ကြာညောင်းစွာ တည်ရှိနေရခြင်း ဖြစ်လေသည်။
လူသည် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး သတ္တ၀ါ ဖြစ်၍ အချင်းချင်း အပေါ် ပြေပြေလည်လည်၊ ရင်းရင်း နှီးနှီး ဆက်ဆံနေကြရသည်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ပြေလည်ကောင်းမွန်လျှင် ကောင်းမွန် သလောက် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လူတိုင်းတွင် မိတ်ဆွေကောင်း ၊ ဘ၀ခရီးဖော်ကောင်းများ သည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်လှသည်။
မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟ နည်းခြင်း များခြင်းသည် မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟ လုံးလုံး မရှိခြင်းနှင့် နှိုင်းစာလျှင်
တော်ပေသေး သည်။ အဓိကမှာ အပေါင်းအသင်း နည်းခြင်း ၊များခြင်းထက် မ်ိတ်ဆွေကောင်း တစ်ယောက် ရှိခြင်းက ပို၍ အကျိုးများနိုင်ပေသည်။
မ်ိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများ အကြောင်း ပြောဆိုကြသောအခါ လူအများစုသည် မိမိအား အကျိုးပြုနိုင်မည့် မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများကို သာ တမ်းတမ်းတာတ ပြောဆိုကြ၏ ။ မိတ်ဆွေတုများကို မလိုချင်၊ ရွံ့မုန်းကြ၏ ... စကားလက်ဆုံကျကြလျှင် မိတ်ဆွေညံ့များ အကြောင်းကို ညည်းညည်းညူညူ ပြောကြမည် မှာ ဓမ္မတာပင် ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မိမိတို့တွင် မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်းမရှိသည်က များသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အမှန်စင်စစ်တွင် ဤလောကတွင် မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများသည် မရှားပါးပါ။ များစွာ ရှိပါ၏ ။ ရှိလည်း ရှိနေပါ၏ ကိုယ်က ရှိအောင် မလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် မရှိရခြင်း၊ ရှားပါးဖြင်း ဖြစ်၏။ မိမ်ဘက်က မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း ကို ရယူလိုလျှင် မိမိကလည်း ထိုမိတ်ကောင်းဆွေကောင်း ဖြစ်စေလိုသူတို့ အား မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း တစ်ယောက်အဖြစ် ပြန်လည် ပေးလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်လျှင်မိမိဘက်က ဘာတွေကို ပေးမည်နည်း။ မိတ်ဆွေကောင်း လိုချင်သော ပုဂ္ဂိုလ်မှ မ်ိမိထံတွင်ရှိနေအောင် ကျင့်ကြံနေထိုင်အပ်သည့် အကြောင်းတရား (၄)ပါးမှာ-
၁။ စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်းဖြင့် မိမိမိတ်ဆွေအပေါ် ကျေးဇူးပြုခြင်း။
၂။ စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်းဖြင့် မိမိမိတ်ဆွေအပေါ် ဆင်းရဲအတူ၊ ချမ်းသာအတူ၊ အေးအတူ ပူအမျှ နေထိုင် ဆက်ဆံခြင်း၊
၃။ စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်းဖြင့် မိမိမိတ်ဆွေအပေါ် အကျိုးစီးပွားရှိရာ ရှိကြောင်းကို ညွှန်ပြပြောဆိုခြင်း။
၄။ စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်းဖြင့် မိမိမိတ်ဆွေအပေါ်အစဉ် ကြင်နာ သနားခြင်းတို့ ဖြစ်လေသည်။
ဤတရားလေးပါးကို မိမိ၏ မိတ်ဆွေအပေါ် ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် လူ့လောက၏ လာဘ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် မိတ်ဆွေကောင်းများကို မိမိက တစ်ဖန်ရယူနိုင်ကြောင်း မှတ်သားနိုင်ပါသည်။
လူအများစုသည် အရေးအကြောင်း ရှိသောအခါ မိတ်ဆွေကောင်းတို့၏ အကူအညီအစောင်အမကို မရကြသဖြင့် မိမိပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရသော အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများအပေါ် အပြစ်တင် တတ်ကြသည်။ သို့သော် မိမိဘက်မှ မိတ်ဆွေကောင်း မပီသသော ချို့ယွင်း အားနည်းချက်များကို ကား မမြင်တတ်ချေ။ မိမိဘက်မှ မိမ်ိမိတ်တွေ များ အရေးအကြောင်း ရှိလာသောအခါတွင် ဘာများ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသနည်း။
မိမိလိုလားသော မိတ်ဆွေများ၏ အရည်အချင်း စိတ်နေစိတ်ထားမျိုး မိမိတွင် ရှိပါသလော ဆိုသည်ကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်သင့်ပါသည်။ အရေးကြီးဆုံးမှာ မိမိကိုယ်တိုင် မိတ်ဆွေကောင်း မပီသဘဲနှင့် ဘယ်သောအခါမျှ မိမိထံသို့ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း တို့ ရောက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း လေးလေး နက်နက် ခံယူ မှတ်သားထားရန် ဖြစ်ပါသည်။
အဆွေ ခင်ပွန်းကောင်းသည် မိမိအား လူကောင်းသူကောင်း ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်သာ မက စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် အရေးကိစ္စများတွင်လည်း ပြီးစီးအောင်မြင်စေရန် စွမ်းဆောင်ပေးနိင် သော တန်ခိုးရှိလေသည်။ ထို့ကြောင့် လူ့လောကတွင် လူတန်းစေ့ အသက်ရှင် နေထိုင် လိုလျှင် မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်းရှိခြင်း ဟူသည့်ဂုဏ် ရှိရန် လိုသည်။
အကြင်လောကသည် သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် မျှတသော အပေးအယူတို့ဖြင့် လိုက်ဖက်ညီစွာ တည်ဆောင် ထားနိုင်အံ့။ ထိုလောကသည် နေချင့်စဖွယ် ဘုံဗိမာန်ကြီး တစ်ခု ဖြစ်လာမည် မှာ မလွဲချေ။ ထို့အတူ အကြင် ပုဂ္ဂိုလ်သည် သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် မျှတစွာ ကြည့်တတ်သော စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်းတို့ဖြင့် မိတ်ဆွေကောင်းတို့၏ အရည့်အသွေးကောင်းတို့ကို မွေးမြူထားအံ့။ ထိုသူသည် မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း တို့၏ အကူအညီကို ရ၍ ကြီးပွားချမ်းသာလာမည်ကား အမှန်ပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, November 11, 2012 No comments:
ရေးသားသူ juno at Sunday, November 04, 2012 1 comment:
မျက်ခုံးကိုပင့်၊ မျက်လုံးကိုပြူးပါ၊ မျက်ဆံတွေက ရှေ့တည့်တည့်ကို စိုက်ကြည့်ထားရပါမယ်။ လက်ခလယ် နှစ်ဖက်က မျက်လုံးနှစ်ဖက်ရဲ့ ထောင့်စွန်းများကို ဖိပြီး အပေါ်သို့ ဆွဲတင်ထားပါ။
ဘယ်ဘက်လက်က ခါးကိုထောင်ပြီး ညာလက်ညှိုးကို ညာမျက်လုံးအပေါ် ၄၅ ဒီဂရီ ကျလောက် တွင် ထောင်ကာ မျက်လုံးများက ထောင်ထားသော ညာလက်ညှိုးကို စွေပြီးကြည့်နေပါ။
ထိုပုံစံတိုင်း ၁ မှ ၂၀ အထိ ရေတွက်ကာနေပါ။
ညာဘက်လက် က ခါးကိုထောင်ထားပြီး ဘယ်ဘက်လက်ညှိုးကို ဘယ်မျက်လုံးအပေါ် ၄၅ ဒီဂရီကျကျလောက်တွင် ထောင်ကာ မျက်လုံးများက ထောင်ထားသော ဘယ်လက်ညှိုးကို စွေပြိး ကြည့်နေပါ။
မျက်လုံးများ စွေကြည့်သည့် အခါ ဦးခေါင်းကို မလှုပ်ရပါ။ မျက်လုံးများကပဲ စွေကြည့်ပါ။
မျက်ခုံးကို ပင့်ထားတဲ့အတွက် မျက်ခွံမကျစေပါ။
မျက်လုံးကို ပြူးထားတဲ့အတွက် မျက်လုံးများမှာရှိတဲ့ သွေးကြောများကို ဆန့်လိုက် သလိုဖြစ်လို့ မျက်လုံးမှိတ် တုတ် မှိတ်တုတ်ဖြစ်ခြင်း ၊ မျက်ကြောလိုက်ခြင်းတို့ကို မဖြစ်စေပါ။
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, November 03, 2012 No comments:
ကျွန်မတို့အားလုံးရဲ့ ဘ၀မှ အချိန်ပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ စိုးရိပ်သောက ဖြစ်ဖူးခဲ့ကြတာချည်းပါပဲ. . . တချို့သော သူတွေက စိုးရိမ် သောကဖြစ်ရတာ အကျင့်ပါနေတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သောက မဖြစ်ရရင် မနေနိုင်တဲ့သူတစ်ဦး မဟုတ် တစ်ဦး က တော့ရှိနေတတ်ပါတယ်. . ရောဂါ ကူးစက်မှာ စိုးရိမ်ပြီး ဆပ်ပြာတစ်တုံး ကုန်အောင် ရေချိုးတတ်သူတွေ၊ ရွံတတ်တဲ့ စိတ်နဲ့ ခဏခဏ လက်ဆေးတတ်သူတွေ ၊ တောင်ကုန်းပေါ်လမ်းလျှောက်ရင် မြေပြိုကျပြီးသမှာ စိုးရိမ် တတ်သူတွေ ၊ အပြင်ကပြန်မလာသေးတဲ့ အိမ်သားတစ်ယောက် ဟာ လမ်းမှာ ကားတိုက်ပြီလား ၊ လူဆိုးတွေနဲ့ တွေ့နေပြီ လားလို့တွေးပြီး သောက ဖြစ်နေတတ်သူတွေကို စာဖတ်သူတို့ ကြုံဖူးကြမှာပါ ။
သောကဆိုတာ ကြောက်ရွံ့ခြင်း ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ လိုက် လာတတ်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ကုန်ခန်း သွားစေတဲ့ခံစားမှုပဲ မဟုတ်ပါလား။နှလုံးရော ဂါနဲ့ သွေးတိုးရောဂါ တွေတောင် ဖြစ်ပေါ် လာစေနိုင်ပါတယ် ။ သောကဆိုတာ ဖြစ်တည်နေစေဖို့ ဆိုးဆိုး ၀ါးဝါး အဖြစ် တစ်ခု ဖြစ်တော့မယ်လို့ စိတ်ထဲက တွေးထင်နေရပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်မတို့ စိုးရိမ်နေတဲ့ အရာက ဖြစ်မလာသေးပါဘူး။ အဲဒီ မကောင်းတဲ့ အရာကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရရင်တော့ စိတ်ကူးယဉ် မှုပါပဲ သောကဆိုတာ မိမိဘာသာ ထွင်ဖန်တီးထားတဲ့ စိတ်အခြေအနေ ဖြစ်တဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုလို့ နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လည်း ကျွန်မတို့ အများစုကတော့ သောက ဖြစ်မြဲပါပဲ။
ကျွန်မတို့ စိုးရိမ်သောကဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အကြာင်းတစ်ခု က ကျွန်မတို့မှာ ထိန်းချု့်နိုင်တဲ့ အင်အားမရှိဘူးလို့ ခံစားရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ကျွန်မတို့ရဲ့ ရင်သွေးတစ်ဦးဦးရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မပေါင်းသင်းအပ်တဲ့ သူတွေ ၊ လူနေမှု စရိုက်မတူညီသူတွေ ရောက်လာမယ်ဆိုရင် ခြေလှမ်းများ မှားသွားမလား မသင့်တော်တာတွေ ဖြစ်လာမလားလို့ မိဘများမှာ စိုးရိမ်သောက ရောက်ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မျှော်မှန်းပြီး သာ စိုးရိမ်ရတာပါ။ သူကိုယ်တိုင် နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ရင် သူ့ဘ၀ ချောမွေ့သွားမှာပါ ၊ စိတ်ဓာတ် ရင့်ကျက်ဖို့နဲ့ အမှားအမှန်ခွဲခြားနိုင်ဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ တရားသဘော အရ သောကဆိုတာ ဒေါသပဲဖြစ်လို့ သောကများလေ အကုသိုလ် ဖြစ်လေပါပဲ။ အကောင်းဆုံးကတော့ စိတ်အေးအေးထားပြီး သူ့အပေါ် မှာ မေတ္တာပို့ပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေ့ရဲ့ မေတ္တာ ဂရုဏာကြောင့် သားလေးလမ်းမှားမလိုက်မိဘဲ အသိဥာဏ် ရှိရှိ ဆင်ခြင်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်လာဘဲ စိုးရိမ်သောက ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေထဲကို ရောက်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင် စရာ နည်းလမ်းရှာကြည့်ရတော့မှာပါ။
လူဆိုတာ ပျက်စီးဖို့လမ်းကြောင်း မှားဖို့ အချိန်တန်လာရင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး ဆိုတဲ့ အတိုင်း ဖြေသိမ့် ဆင်ခြင်လိုက်မယ် ဆိုရင် သက်သာရာရပြီး သောက ဒေါသ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ အဲလိုပါပဲ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ယောက်က ရာသီဥတု ဆိုးဝါးလှတဲ့ အချိန်မှာ ကားမောင်းပြီးတော့ အိမ်ပြေန်လာနေတယ် ဆိုရင် စိတ်ပူပင်မိမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် လည်း သူ့ရဲ့ ခရီးအဆုံးကို ဘေးမသီ ရန်မခဘဲ ရောက်လာတဲ့ အထိတော့ သောက ဖြစ်နေပါတယ်။ ထိန်းချုပ် နိုင်တဲ့ အင်အား ရှိတယ် ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ကြိုးပမ်း မှုတစ်ခုပါပဲ။ တကယ်တော့ သောကငယ် ဖြစ်နေတာက အကျိုးရှိတဲ့ ရလဒ်ကို မပေးနိုင်ပါဘူး။ ပြီးတော သောက က ကျွန်မတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်ကို မနှစ်မြို့ဖွယ်အကျိုး သက်ရောက်မှု ကို ရစေပါတယ်။
သောက က စိတ်ကူးမျှော်မှန်းခြင်းကို အသုံးပြုသလို၊ သောကဖြေဆေးကလည်း စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို အသုံး ပြုရမျာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ စိတ်သောက ရောက်လာရင် အဆိုးဆုံး ရလဒ်ကို မျှော်မှန်းမယ့် အစား အကောင်း ဆုံး ရလဒ်ကို မှန်းဆလိုက်ပါ။ ချစ်ခင်သူလာနေတဲ့ လမ်းက ဖြောင့်ဖြူးနေတယ် လို့ မြင်ယောင် လိုက်ပါ။ စိတ်ထဲမှာ ချောမောစွာ န်ြလည်ရောက်ရှိလာတာကို ကြည်လင်ပြတ်သား စွာ မြင်ကြည့်လိုက်ပါ။ သူတော်ကောင်းတွေ ၊ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေက စောင့် ရှောက်ပေးနေတယ် လို့ စိတ်ကူးလိုက်ပါ။
သားအတွက် စိုးရိမ်မိတယ် ဆိုရင်လည်း သားလေးက စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူပါ။ အခုဖြစ်နေတဲ့ အဟန့်အတားတွေက ခဏပဲ နေမှာပါ မကြာခင် အားလုံး ပြေလည်သွားလိမ့်မယ် လို့ စိတ်ထဲ က မျှော် မှန်းထားပါ။ ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ပြီး စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်နေမယ့်အစား အေးငြိမ်းခြင်းနဲ့ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ခြင်းကို အစပျိုါ်လိုက်စေလိုပါတယ် ။ စောစောက ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း မေတ္တာပို့လွှတ်ပြီး နေ လိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီး သားလည်း အန္တရယ် ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မတို့ သောကဖြစ်ရတဲ့ နောက်ထပ် အကြောင်း တစ်ခုက ကျွန်မတို့က ပြီးပြတ်အောင် မရှင်းလင်းဘဲ ရှောင်ရှားနေမိတဲ့ အကြောင်း တစ်ခုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ကားစောင့်ခ ငွေမပေးရသေးတာ၊ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ကို ချောင်ထိုးထားမိတာ၊ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်နဲ့ ပြသာနာကို မဖြေရှင်းသေးတာ စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ ကျွန်မတို့ စိုးရိမ်ပူပန်နေရပြီဆိုတာကို အသိ အမှတ် ပြု လိုက်ပြီး ပြီးပြတ် အောင် ဆောင်ရွက်လိုက်တာ က အကောင်းဆုံး အဖြေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အင်အားနဲ့ ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် သောက ဖြစ်စရာ ဘာ အကြောင်း မှ မရှိတော့ ပါဘူး။
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, October 23, 2012 No comments:
ကျွန်မသူငယ်ချင်း တွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တုန်း
ချစ်သူတွေ အကြောင်း ရောက်သွားပါတယ်။
ကျွန်မ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က
သူ့ရဲ့ အိပ်မက်ထဲ က ချစ်သူ့ပုံရိပ်အကြောင်း ပြောပါတယ်။
"ငါ့ ချစ်သူက အရပ်မြင့်ရမယ်၊ အသားဖြူရမယ်၊ ပညာတော်ရမယ်၊ စိတ်ကောင်းရှိရမယ်။"
သူ့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေက မနည်းလှပါဘူး။
ကာလတော်တော်ကြာ ပြီး တစ်နေ့မှာတော့
သူနဲ့ ကျွန်မ တို့ ပြန်ဆုံဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ သူပြောခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ချစ်သူ ပုံရိပ်ကို သတိရသွားတဲ့အခါ သူအမျိုးသားကို အားနာသွားမိပါတယ်။
ပြီးတော့ သူကပဲ ကျွန်မ အတွေးကို သိနေလို့လားမသိ၊ ပြောသွားပါသေးတယ်။
"အချစ်ဆိုတာ ဘယ်လို စည်းကမ်း ၊ သတ်မှတ်ချက် မျိုးကိုမဆို ပျောက်ပျက်သွား စေနိုင်တယ်တဲ့ ...."
ရေးသားသူ juno at Wednesday, October 17, 2012 1 comment:
Loving can sometimes
take awayalot from us,
but whether you see it or not,
not loving always takes away more.
In fact, it takes you away from your deepest desire.
ကိုယ်တို့ သိမြင်သည်ဖြစ်စေ၊ မမြင်သည်ဖြစ်စေ
ကိုယ်တို့ထံမှ အရာများစွာကို ယူဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။
အမြဲတမ်း (အရာများစွာကို) ပိုပြီး ယူသွားတတ်လေရဲ့။
မင်းကို အနက်ရှိုင်းဆုံး အလိုဆန္ဒတွေဆီက
ရေးသားသူ juno at Sunday, October 14, 2012 No comments:
ညာဘက်လက်ကို ဘယ်ဘက်သို့ ဆန့်ထုတ်ပြီး ဘယ်လက်ကို ရင်ဘတ်နားတွင် ကပ်ထားပါ။ ပုံ(၂)
ဘယ်လက်ကို ညာဘက်သို့ ဆန့်ထုတ်ပြီး ညာလက်ကို ရင်ဘတ်နားတွင ကပ်ထားပါ။ ပုံ(၃)
ဤကဲ့သို့ တစ်လှည့်စီ အကြိမ် ၂၀ ခန့် ပြုလုပ်ပေးပါ။
လေ့ကျင့်သည့်အခါ တင်ပါးနှင့် ခန္ဓာကိုယ် အောက်ပိုင်းကို ငြိမ်အောင် ထားပြီး ခါးနှင့် ခါးအပေါ်ပိုင်းကိုပဲ လှုပ်ရှားပေးပါ။
နောက်ကျောပြင်တစ်လျှောက်ရှိ အဆီများကို ကျဆင်းစေပါတယ်
ဦးခေါင်းကိုပါ လိုက်လှည့်သည့်အတွက် ပခုံးကြောများကိုလည်း ပြေစေပါတယ်
ရေးသားသူ poemflower at Thursday, October 11, 2012 1 comment:
မိမိဦးဆောင် အောင်မြင်သော ကိစ္စတိုင်းကို
မိမိရဲ့ လက်အောက် က လူတို့၏
တဖွားဖွား ပေါ်လာမှာ မလွဲဘူး။
အကျိုးပြုမယ်လို့ မထင်ပါဘူး ။
ရေးသားသူ juno at Thursday, September 20, 2012 1 comment:
မပြစ်မှား ထိုက်သူတွေကို ပြစ်မှားရင် ခဲခဲယဉ်းယဉ်းနဲ့ ရထားတဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ ဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်။
အိမ်မှာ ရှိတဲ့ စပါးက ပုပ်သွားတတ်တယ်။
ရွှေတွေက မီးကျီးခဲ့ ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
ပုလဲက ၀ါစေ့ ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
ငွေအသပြာက အိုးခြမ်းကွဲ စသည် ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
ခြေနှစ်ချောင်း၊ ခြေလေးချောင်း သတ္တ၀ါတွေဟာ ကန်းတာ ၊ ကွေးကောက်တာ စသည် ဖြစ်သွားတတ်တယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ရန်သူက ကိုယ့်ကို ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်နိုင်တာထက် ကိုယ့်ရဲ့ မကောင်းတဲ့ စိတ်ထားက ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်တတ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး မပျက်လိုတဲ့ စည်းစိမ်ရှင်ဟာ မပြစ်မှားထိုက်တဲ့ သူတော် ကောင်းတွေကို မပြစ်မှားမိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ပြစ်မှားရင် စီးပွားရေးလည်း အကြီးအကျယ် ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။ စီးပွားတက်လေလေ သူတော်ကောင်းတွေကို လေးစား ရိုသေနိုင်လေလေ ဖြစ်ရပါမယ်။ စီးပွား မာန်တက် ပြီး မလုပ်သင့်တာလုပ်၊ မပြောသင့်တာ ပြော၊ မကြံသင့်တာ ကြံရင် မကြာခင် စီးပွားရေး ကျဆင်းကြရပါမယ်။
ရေးသားသူ poemflower at Thursday, September 13, 2012 1 comment:
မိတ်ဆွေ စစ် မိတ်ဆွေညာ
အိုမင်းနဲက လူမမယ်( မည်)
လွတ်အောင်ကွယ် ရှောင်နိုင်ဖို့ ။
ရေးသားသူ juno at Thursday, September 06, 2012 No comments:
ရေးသားသူ juno at Sunday, September 02, 2012 No comments:
အဖိုးတန် ရတနာနှင့်တူတေသာ ဥပါသကာ ခေါ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ဂုဏ်ရည် များမှာ-
၁။ ရတနာသုံးပါးအပေါ်၌ နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်ခြင်း။
၃။ အထူးအဆန်း ဖြစ်ပေါ်လာသော အမြင်အကြား အထိအတွေ့တို့ကို ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်း မင်္ဂလာ ဟု မယုံကြည်ခြင်း။
၄။ လောကီမင်္ဂလာတို့ကို မယုံကြည်ဘဲ ကံ ကံ၏ အကျိုးကိုသာ အနှစ်သာရ အားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်း။
၅။ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွင်း၌သာ မြတ်သော အလှုခံ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရွေးချယ် စီစစ်၍ ဦးစွာ ပေးလှူ ကြည် ဖြူ မြတ်နိုးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
ဤ ဂုဏ်ရည် ငါးမျိုးနှင့် ပြည့်စုံ ညီညွတ်ပါက တော်ဝင် ရတနာနှင့် တူသော ဥပါသက အစစ် တကယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်သည်။
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, September 01, 2012 1 comment:
သား. . . . မညံ့ခဲ့ပါဘူး ကွယ်။
"၀မ်းဆွဲကောင်းလို့ပါ ." ပါ
သား ကိုယ်သား အထင်ကြီးပြီး
ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်း ရှိလို့သာ
သားကြီးပွား အောင်မြင် သွားတဲ့အခါ
သားရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အစွမ်းအစကြောင့်ဆိုတာ
မေးစရာမလိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲကွယ် ...
အောင်မြင်ကြီးပွားအောင် ......... ကြိုးစားနော်...
ရေးသားသူ Anonymous at Tuesday, June 26, 2012 1 comment:
ရေးသားသူ poemflower at Monday, June 25, 2012 No comments:
ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူပြီးနောက် သာသနာကို စောင့်ရှောက်ရစ်မည့် ရှင်မဟာကဿပ အလောင်း "ပိပ္ပလိ" သတို့သားသည် အလုပ်သမား ရွာပေါင်း ၁၄ ရွာနှင့် စစ်တပ် အစိတ်ကို ပိုင်ဆိုင်လျှက် ကုဋေများ စွာ ဥစ္စာကြွယ်ဖြိုး သူဌေးမျိုးမှ သူဌေးကတော်နှင့် အတူ ရဟန်းပြုလာခဲ့သည်။ သူတို့ နှစ်ဦး လမ်းခွဲသော နရာ၌ ကမ္ဘာမြေ တုန်လှုပ်သံကို အရင်းခံ၍ ဆင်ခြင်တော်မူသော ဘုရားရှင်လည်း အကြောင်း အရာကို ကောင်းစွာ သိမြင်တော်မူနှင့်လေသည်။
ထိုခဏ၌ပင် ဝေဠုဝန် ကျောင်းတော်မှ ၃ ဂါ ၀ုတ်မျှ ဝေးကွာသော ပြည်ညောင်ပင်သို့ ကြွတော်မူ၍ ခရီးကြို ဆိုကာ ရောင်ခြည်တော်ခြောက်ဖြာ ထွက်စေကာဖြင့် ထိုငနေတော်မူနှင့်လေသည်။ ကဿပ အရှင်သည် ဘုရားကိုမြင်လျှင် "ငါ့ဆရာပင်တည်း" ဟု ဆုံးဖြတ်၍ ဘုရားခြေတော်တွင် ဦးခေါင်းတင်ကာ တပည့်ဖြစ်ပါကြောင်းကို လျှောက်ထားလေသည်။ ဘုရှားရှင်သည် သံဃာ့ပရိသတ်အလယ်၌ မကြာမကြာ တန်းတူထား၍ မြှောက်စားတော်မူလေသည်။
THE BUDDH WELCOMING THE PERSON WHO HAD RETIRED FROM THE WORLD AND WAS TO BECOME THE VENERABLE MAHAKASSAPA
Pippali was destined to become Venerable Mahakassapa who would protect the dispensation of the Dhamma afger his death. He was in charge of 14 villages of workmen andasection of the fighting forces. He belonged toavery rich family worth several crores of money and together with his wife retired from home-life to leadareligious life. There wasamighty earth-quarke at the place where Pippali parted with his wife on retirement from the world. The Buddha surveyed with his Buddha-eye and saw the cause of the earth-quarke.
Immediately there after the Buddha went to the giant banyan tree about3gavutas away ( about six miles) to welcome Pippali. He then sat at the foot of the tree causing the six resplendent rays of light to issue forth from his body. Pippali,who later came to be known as Mahakassap, saw the Blessed One and , coming to this decision. " He indeed is my master", placed his head upon the feet of the Blessed One and said, "Lord, I am your disciple". The Buddha often honoured him before the assembly of monks by treating him asamember of the Holy Order ofastanding equal to him.
ရေးသားသူ Anonymous at Sunday, June 24, 2012 1 comment:
တရားနှင့်သာ ၊ ဆင်ခြင်ပါစို့။
ကံသာ ကြောင်းရင်း၊ သူဖန်ဆင်းလို့
မူကုန်နောင်ရေး ၊ မသိသေး၍
ရယ်ပြုံးမေ့ကာ ၊ စိတ်ထင်ရာကို
နုနယ် ပျိုစင်၊ မအိုခင်က
မကွေးတိုင်း၊ မြိုင်မြို့နယ် ဆီးတောရွာကျောင်း။
ရေးသားသူ poemflower at Friday, June 15, 2012 1 comment:
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, June 05, 2012 No comments:
သူတစ်ပါး ဘာဖြစ်ဖြစ် စိတ်မ၀င်စားဘူး
လူဖြစ်ပြီး လူ့အကျင့်ကို မကျင့်ဘဲ
လူ့တိရစ္ဆာန် လို့ အခေါ်ခံရတာဟာ
လူဟာ လူလိုပဲ ကျင့်ရပါတယ်
ရေးသားသူ Anonymous at Sunday, May 27, 2012 No comments:
သာကီဝင်မင်းသား ခြောက်ယောက် ရဟန်းပြုကြပုံ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားဖြစ်ပြီးသောအခါ နန္ဒမင်းသားစသော သာကီဝင်မင်းသားများစွာတို့ ဘုရားထံ ရဟန်းပြုကြလေသော် သားနှစ်ယောက် သုံးယောက်ရှိသော အိမ်တော်မှ တစ်ယောက်မျှ ထွက်၍ ရဟန်းမပြုလျှင် တာဝန်မကျေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေရကား မဟာနာမ်နှင့် အနုရုဒ္ဓါ ညီနောင်နှစ်ပါးတိုင်ပင်ကြရာ အနုရုဒ္ဓါမင်းသားက ရဟန်းပြုမည်ဟု ၀န်ခံလေသည်။ ထိုအချိန်မှာ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်နေသာ ဘဒ္ဒိယမင်းသည် အနုရုဒ္ဓါမင်းသာနှင့် ရင်းနှီးသော သူငယ်ချင်းပေတည်း။
ထို့ကြောင့် အနုရုဒ္ဓါသည် ဘဒ္ဒိယမင်းထံသွား၍ ရဟန်းပြုဖို့ရန် အဖော်ညှိလေရာ ဘဒ္ဒိယဘုရင်လည်း ရဟန်းပြုဖို့ ၀န်ခံပြန်၏ ဤနည်းအားဖြင့် အာနန္ဒာ၊ ဘဂု၊ ကိမိလ၊ ဒေ၀ဒတ်နှင့် ဆတ္တာသည် ဥပါလိ ၇ ယောက်လုံး ဘုရားထံရောက်လာကြလေသည်။ ထိုအခါ "သာကီဝင်မင်းမျိုးသည် အလွန်မာနကြီးပါသည် ။ ထိုမာနကို နှိမ်ချိုး၍ ဥပါလိကို ရှိခိုးနိုင်ဖို့ရာ ဥပါလိကို ပထမ ရဟန်းပြုပေးပါ " ဟု လျှောက်၍ နောက် မိမိတို့ ရဟန်း ပြုကြလေသည်။
ORDINATION OF SIX PRINCES OF THE SAKYA CLAN
After the attainment of Supreme Buddhaship by the Great being, Nanda and many other princes of the Sakya clan became monks under the discipline of the Blessed One. It therefore appeared to those households of the same clan, with two or three sons in each family , that they would be failing in their duty if none came forth to be ordained.The two brothers Mahanama and Anuruddha discussed this subject, and Anuruddha agreed to be ordained.
Bhaddiya who was thenaruling monarch, happened to be an intimate friend of Anuruddha. Anuruddha therefore went to king Bhaddiya and persuaded him to becomeamonk along with him, and Bhaddiya agreed. Accordingly, seven of then including Ananda, Bhagu, Kimila, Devadatta and Upali, the barber came to the Buddha. There they made their requesth that Upali be admitted first, in order that their Sakya pride might be humbled through having their former attendant as their senior. They were then ordained accordingly.
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, May 26, 2012 1 comment:
လက်ထပ် ယူထားတဲ့ သူကို
ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်ပြီး
ကံ ပါလာရင်လည်း အားမငယ်နဲ့.
ရေးသားသူ Anonymous at Thursday, May 24, 2012 No comments:
ချွေးထုတ်ပြီး အဆိပ်အပုပ်ရှင်းထုတ်နည်း (၂)
အဆိပ်အပုပ်များကို ပေါင်းငွေ့ခံရေချိုးပြီး ချွေးထုတ်နည်းဖြင့်လည်း ချွေးထုတ်နိုင်ပါတယ်..
ရေစိမ်ကန် သို့မဟုတ် ရေပူစမ်းမှာ ရေနွေးချိုးခြင်းဖြင့်လည်းအဆိတ်အပုပ်များကို ကိုရှင်းထုတ်နိုင်ပါတယ်. . . ရေနွေးချိုးပြီးနောက် အရေပြားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့၏ အပူရှိန်မြင့်မားမှုကြောင့် အလွယ်တကူ ချွေးထွက်လာပါတယ်. . . ကိုယ်တွင်းကမကောင်းသော အခိုးဓာတ်၊ လေနှင့် အခြားသော အရာများသည် ချွေးရည်များသည် ထွက်လာပါသည်။ အရေပြားများကို သန့်စင်ရာတွင် ဒီနည်းဟာ ထိရောက်ပြီး လုံခြုံ စိတ်ချရပါသည်။ သို့သော သွေးတိုးနှင့် နှလုံးရောဂါသမားများ သည် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှ ဒီနည်းကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်. . ဒီနည်းဖြင့် ချွေးထုတ်ရာတွင် ချွေးထွက်မှုမများအောင် ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်. . .
အစားအသောက် စားသုံးခြင်းဖြင့် အဆိတ်အပုပ်များကိုလည်းရှင်းထုတ်နိုင်ပါသည်
အစားအသောက်ဖြင့် ချွေးထုတ်ခြင်းက ပိုမိုလွယ်ကူပါသည် ခန္ဓာကိုယ်ချည့်နဲ့သူများနှင့် ပိုမို ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ပဲနီလေး (သို့) ပဲစိမ်းဖြင့် ဆန်ပြုတ်ပြုတ်သောက်ပြီး ချွေးထုတ်နိုင်ပါသည်. . . ဆန်ပြုတ်သောက်ခြင်းဖြင့် ချွေးမထွက်ပါက ဆန်ပြုတ်ပူပူတွင် အပူအစပ်ထည့်ပြီး သောက်သုံးနိုင်ပါသည်. အစာအိမ်နှင့် လိပ်ခေါင်းရှိသူများသည် ငရုပ်သီးကိုရှောင်ကျဉ် ရပါမည်။ ကြံသကာနှင့် ချင်းပြုတ်ရည်ကိုလည်း သောက်နိုင်ပါသည်။
အင်္ကျီအ၀တ်အစားထူထူဝတ်ခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်သော အခန်းတွင်း စောင်ခြုံပြီးနေခြင်းအားဖြင့်လည်း ချွေးတုထတ်နိုင်ပါသည်။ ဒီနည်းဖြင့် ချွေးထုတ်မည်ဆိုပါက ရေများများသောက်ဖို့လိုပါသည်။ ကျောက်ကပ်မထိအေအာင်အတွက် ဆီးရည်ထဲအညစ်အကြေး ပျော်ဝင်နှုန်းမြင့်မနေရန် ဆီးရွှင်၊ဆီးများအောင် ဂရုစိုက်ပေးရပါသည်။
ဆေးပညာနည်းနာဖြင့် အဆိပ်အပုပ်ရှင်းထုတ်ခြင်းသည် အချိန်တိုအတွင်း အထိရောက်ဆုံး စွမ်းဆောင်ချက်များဖြစ်ပါသည်။ ယခုဖော်ပြပါနည်းများဖြင့် ရံဖန်ရံခါ အဆိပ်အပုတ်များကိုရှင်းထုတ်သင့်ပါသည်. . ကာလကြာရှည်စါာ အားကိုးမှီခိုဖြင့် မဖြစ်စေဖို့အကြံပြုလိုပါသည်။
ရေးသားသူ poemflower at Friday, May 18, 2012 No comments:
ရေးသားသူ Anonymous at Saturday, April 28, 20125comments:
လူသားများသာ ဖြစ်သည်. . . တဲ့
Jess Lair ဆိုတဲ့
ရေးသားသူ Anonymous at Saturday, April 21, 2012 No comments:
အားလုံးဟာ ပြည့်စုံတဲ့ အရာတစ်ခု
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, April 17, 2012 1 comment:
ဟိုတစ်နေ့က သေ၍ လူ့ပြည်သို့ ခေတ္တရောက်၊ စိတ်မမောက်ကြနှင့် ၊ စိတ်နေမောက်က အရင်းပျောက်မည်
( ဒီပဲရင်း ဆရာတော်ကြီး)
ပန်းကန်ကွဲပြီးမှ ပန်းကန်ကွဲကြောင့် စိတ်မညစ်ပါနဲ့ ဖြစ်ပျက်ပြီးသား စိတ်မချမ်းသာစရာ ကိစ္စများကို တွေး၍ စိတ်ညစ်မခံပါနှင့်
အကြင်အဆွေခင်ပွန်းနှင့် ပေါင်းဖက်ခြင်းဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲလျှင်၊ ထိုသို့ ဆင်းရဲရကြောင်း ဆင်ခြင် သတိရ၍၊ အဆွေခင်ပွန်းကို မီးပုံကြီးကဲ့သို့ သတိပြုကာနေလေတော့
ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်က ၊ ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးစိတ်နဲ့၊ အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်ရမယ်.
စိတ်အေးချမ်းသာမှုရစေရန် မေတ္တာဗြဟ္မစိုရ်ကမ္မဋ္ဌာန်း စီးဖြန်းကြပါလေ
(ဘဒ္ဒန္တသုဒ္ဓါဘိဝံသ) -မန္တလေး ၊စတုတ္ထမြောက် မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး
ရေးသားသူ Anonymous at Saturday, April 14, 2012 No comments:
အလှအပကို မက်မောတာ မဆန်းပါဘူး.
မိမိကိုယ်ကို လှပအောင် ပြင်ဆင်ကြတယ် .
တကယ်တမ်းမိမိကိုယ်ကို လှပအောင် ပြင်တာထက်
မိမိကိုယ်ကို ခေတ်မီတဲ့ ပုံစံလေးဖြစ်အောင်
ဆံပင်ရှည်မယ် . . ဆံပင်တိုမယ်...
အကွဲအစုတ် ဆုတ်ကာ ဖြဲထားတဲ့ ပုံစံအထိ
အမျိုးမျိုး ဆန်းသစ်တာတွေကို သဘောကျတယ်
ဒါဟာ လူငယ်တို့ရဲ့ သဘာဝပါပဲ
စိတ်ပညာရှင်များက ဒါဟာ လူငယ်တွေရဲ့
တီထွင်ဖန်တီးခြင်း( CREATIVE) ကို
အကျည်းတန်တာကိုတော့ သဘောမတွေ့ကြပါဘူး. .
ဒါကြောင့် လူငယ်တွေ လှပအောင် ပြင်ဆင်တာကို
သို့သော် လှတာမက်ရင် ညစာခက်မယ်
ဆိုတဲ့ စကားအရ အလှအပနောက်သို့လိုက်ပြီး
ငွေကြေးတွေကို မှားယွင်းစွာ မသုံးမိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်..
သို့သော် ထဘီကလည်း သူ့နေရာနဲ့သူလှပပါတယ်...
အလှအပနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဆောင်းပါးများကို
ရေးသားသူ Anonymous at Wednesday, April 11, 2012 No comments:
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ခမည်းတော် စံနန်း၌ ဆွမ်းဘုဉ်းပေနေစဉ် ယသော်ဓနရာသည် သားတော်ကို တန်ဆာဆင်၍ ချစ်သား ရဟန်းနှစ်သောင်း၏ အလယ်မှာ တင့်တယ်စွာ နေတော်မူသော ရဟန်းတော်မြတ်သည် သားတော်၏ ခမည်းတော်ပင်တည်း မောင့်ခမည်းတော်မှာ ရှိသော ရွှေအိုးကြီးတွေကို တော်ထွက်သွားသည့် နေ့ကစ၍ မတွေ့ရတော့ဘူး. . စကြာမင်းလုပ်ရအောင် အဲဒီအမွေကို တောင်းချေ ဟု သင်ကြားကာ ဘုရားထ့သို့ စေလွှတ်လိုက်လေသည်. . .
သားတော်ရာဟုလာသည် ဘုရားအထံသို့ရောက်လျှင် ခမည်းတော်ဟူသော ချစ်ခြင်းဖြင့် ရဲတင်းစွာ ကပ်၍ ခမည်းတော်၏ အရိပ်သည် လွန်စွာအေးချမ်းပါပေ၏ သားတော်စကြာမင်း လုပ်ချင်ပါသည်. . . ခမည်းတော်အမွေကို ပေးပါ. . . ဟု တွတ်တီးတွတ်တာ ပြောဆိုက အမွေတောင်းရှာလေသည်. .. ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ကျောင်းပြန်ကြွရာ၌လည်း အမွေတောင်းကာ နောက်တော်က လိုက်သွားလေသော် ရှင်သာမဏေ ပြုကာ လောကုတ္တရာ အမွေကိုသာ ပေးတော်မူလေသည်....
RAHULA FOLLOWING THE BUDDH AND ASKING FOR INHERITANCE
While the Buddha was having his meal at his father's palace. Priincess Yasodhara dressed up Rahula properly with ornaments and pointing to the Buddha said, "Behold, son, that great ascetic of majestic appearance in the midst of twenty thousand monks. He is your father. The vases of goldd belonging to him have disappeared since the day he retired from home to homelessness.
Go ye and ask for your inheritance so that you may becomeaUniversal Monarh". Young Rahula, emboldened by the lover ofason towards his father, came to his presence and said. " O, father, your shadow is cool and pleasant. I wish to become universal monarch. Please give me my inheritance." He asked for his inheritance, uttering much else that was becoming . He followed the Buddha when he went back to the monastery asking for inheritance. But the Blessed one made him owner of an inheritance transcending this world, by ordaining him asasamanera(novice) of the Holy Order.
ရေးသားသူ Anonymous at Sunday, April 08, 2012 No comments:
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အသက်ကြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုပါတယ် . . သူ့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်က သူ့ထက် အသက် ၂၀ လောက်လည်းငယ်ပါတယ် . . သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကို ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ သွားရောက် ချီးမြှင့်ခဲ့ ကြပြီး သူ့ရဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နှုးမှုကိုတောင် ချစ်စနိုးနဲ့ ကျီစယ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်. .
တစ်လောက သူ့ကို ပြန်တွေ့လို့. .
ကျွန်တော်. . . " ဟာ ဟေ့ကောင်ကြီး ဇနီးငယ်ငယ်နဲ့ အတော် ပျော်နေတယ်ထင်ပါ့. . . စိတ်ပျိုလို့ ရုပ်ရည်က ပိုနုလာ သလိုပဲ"
သူ. . . .. "မဟုတ်ပါဘူးကွယ်. . . . "
ပြီးတော့ ငေးငေးငိုင်ငိုင်နဲ့ပါ. .
ကျွန်တော် . . . . . "ဘာဖြစ်လို့လဲကွ. . . "
သူ. . . . . . "ငါ့အရွယ် အမြင် ခံစားချက်တွေနဲ့. . . သူ့အရွယ် အမြင် ၊ ခံစားချက်တွေက အရမ်းကွာဟနေတယ်ကွယ်. . . . "
ပြီးတော့ ဥပမာ တစ်ခုပေးလိုက်ပါသေးတယ်. . . .
"အသက်အရွယ်ချင်း ကွာဟတဲ့သူကို အိမ်ထောင်ပြုမိတဲ့အတွက် ငါ့အတွက်တော့ မဖတ်တတ်တဲ့ စာအုပ်ကြီး တစ်အုပ် ၀ယ်ထားမိသလိုပါပဲ . . ." တဲ့
ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, April 04, 20122comments:
နုပျိုစွာ နေထိုင်ခြင်း အနုပညာသည် လူ၏ ဗဟိဒ္ဓ မှ တွန့်လိပ်သော အရေးအကြောင်းများ၊ ဆံပင်ဖြူများကို အန်တုလျက် စိတ်ထဲ၊ အသည်းနှလုံးထဲ အတွင်းသန္တာန်ထဲ၌ ငယ်နုအောင်နေခြင်း အပေါ်မူတည်ပါသည်။ နုပျိုခြင်း စမ်းရေသည် သင့်အဇ္ဈတ္တတွင်းမှာ ရှိပါသည်။
နုပျိုခြင်း ဆိုသည်မှာ အတွင်း သန္တာန်ကိစ္စဖြစ်သည်. . . သင်၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် ရင့်ရော်အိုမင်းလာသော်လည်း သင့်ခန္တာကိုယ်သည် သင်မဟုတ်ပါ. . . . . ဆက်လက် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမဲ ဖွံ့ဖြိုးခြင်းဖြင့် နုပျိုအောင်နေပါ။ သင်အိုမင်းလာ မည် မဟုတ်ပါ. . . ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိခြင်းကြောင့်သာ် သင်အိုမင်းလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်များကို ဆက်လက်မက်နေခြင်းဖြင့် နုပျိုအောင်နေပါ. . ဒဿနပညာရှင်တစ်ဦးက ရေးသားခဲ့သည်မှာ. . . . "လူတစ်ယောက်အဖို့ သူ၏ နောက်ဆုံးအိပ်မက် ပျောက်ကွယ်သွားသောအခါတွင် သူ့အား မြှပ်နှံပစ်ခြင်းမှတစ်ပါး တခြားလုပ်စရာ များများ စားစား မရှိပါ"
ရွှင်လန်းတက်ကြွသော တွေးခေါ်ပြုမူပုံကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် နုပျိုအောင်နေပါ . . ရှေးစကားပုံမှ အောက်ပါ လင်္ကာလေးကို စိတ်ထဲမှာ စွဲမှတ်ထားပါ
"ရွှင်လန်းသော နှလုံးသားသည် ဆေးဝါးတစ်လက်ကဲ့သို့ ကောင်းကျိုးပြုသည်"
"ကျိုးပျက်သော စိတ်ဓာတ်ကမူ အရိုးများကို ခြောက်ခန်းစေသည်"
သင်၏ စိတ်ကို ရှင်သန်အောင် ၊နိုးကြားအောင်ထားခြင်းဖြင့် နုပျိုအောင်နေပါ. . သိပ္ပံပညာရှင်တို့က လူ၏တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းသည် အသက်ကြီးခြင်းကြောင့် ကျ မသွား. . .တွေးခေါ်မှုနှုန်း အနည်းငယ် လျော့နည်းသွားခြင်း သည်သည် လူကြီးနှင့် လူငယ်ကြား တစ်ခုတည်းသော ခြားနားမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်. . ဟု ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
သင်၏ စိတ်ဓာတ်ကို လမ်းရိုးလမ်းဟောင်းမှ မောင်းထုတ်ခြင်ငးဖြင့် နုပျိုအောင်နေပါ . . . ရှုံးနိမ့်သောလမ်းသည် . . အရှုံးခံသူတို့အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည် . . နေရာသစ်များကို ရှုမြင်ပါ . . . စာအုပ်သစ်များဖတ်ပါ ၀ါသနာအသစ်များကို စမ်းသပ်မှု ပြုကြည့်ပါ. . . သင့်ဘ၀၏ နက်ရှိုင်းမှုကို တိုးတက်အောင် လုပ်ပါ. . .
သဘောထားပြုလွယ် ပြင်လွယ်ခြင်း၊ အလိုက်သင့် ပြုမူတတ်ခြင်း၊ ပွင့်လင်းသော စိတ်ထားရှိခြင်းနှင့် နုပျိုအောင်နေပါ. . သင့်စိတ်ကို တင်းမာ မနေပါစေနှင့်. .
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး တက်တက်ကြွကြွ ဖန်တီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော ၊ စိတ်ဓာတ်အရ နုပျိုသူတို့ထံမှာ လှုံ့ဆော်မှုကို ရယူရင်း နုပျိုအောင်နေပါ. . . ကောင်းရာကောင်းကြောင်း ကိစ္စများဖြင့် အလုပ်များရင်း နုပျိုအောင် နေပါ. . . အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်သစ်များကို ချမှတ်ပါ. .
စီမံချက် အသစ်များကို ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နုပျိုအောင် နေပါ . . အကျိုးဆောင်ခြင်းဖြင့် နုပျိုအောင် နေပါ. . . သင့်မြို့၊သင့်နယ်၊သင့်နိုင်ငံ၊သင့်ကမ္ဘာ အတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည်များကို လုပ်ပါ. . .
နှလုံးသားကို လန်းဆန်းအောင်ထားခြင်းဖြင့် နုပျိုအောင်နေပါ. . .
ဦးဝင်းတင်(English for All)
ရေးသားသူ poemflower at Thursday, March 29, 20124comments:
စေတနာနှင့် တိုက်တွန်း အားပေးပါ။
စိတ်ချမ်းသာ သွားမှာ သေချာတယ်
ရေးသားသူ Anonymous at Wednesday, March 21, 2012 No comments:
လူငယ် တစ်ယောက် လှေဆောက်နေပါတယ်...
အဘိုးအို. . . . . "ဘာအတွက်လဲ လူလေး"
လူငယ်. . . . ." စာတစ်အုပ်ထဲမှာ. . . ဖတ်ရတယ်. . . နောက်ဆုံး တစ်နေ့မှာ ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံး ရေလွှမ်းမိုးသွားပြီးသက်ရှိတွေ အကုန်လုံး သေဆုံးကုန်လိမ့်မယ် တဲ့ ၊ အဲဒီအတွက်ပါ. . . . "
အဘိုးအိုက ပြုံးပါတယ်. . .
"လူလေးရယ် သက်ရှိတွေ မရှိတော့တဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ မင်းတစ်ယောက်တည်း နေခဲ့ချင်လို့လား. . .. . .လူငယ်က တွေဝေသွားပါတယ်. . .. ပြီးတော့ အဘိုးအိုကို ကျေးဇူး စကား ဆိုလိုက်ပါတယ်. . ."
အားလုံးကိုချစ်ခင်လေးစားလျှက်. . .
ရေးသားသူ Anonymous at Saturday, March 17, 20123comments:
ကြံစည်တဲ့ ငှက်လေး ။
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, March 13, 2012 No comments:
ဘုရားခြေတော်ရင်းကို ဦးခေါင်းဖြင့်ပွတ်တိုက်၍ ယသော်ဓရာ ရှိခိုးနေပုံ
ကပိလ၀တ်နေပြည်တော်သို့ သွားရောက်၍ နောက်တစ်နေ့၌ ဆွမ်းခံကြွတော်မူသော ဘုရားရှင်ကို သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးလာ၍ နန်းတော်သို့ ပင့်ကာ မွန်မြတ်သော အာဟာရတို့ကို ဆက်ကပ် ဘုဉ်းပေးပြီးသည့် အဆုံး ၌ တစ်နန်းတော်လုံး အုံးအုံးကြွက်မျှ ဖူးမြော် ကန်တော့ရောက်ကြသော်လည်း ယသော်ဓရာ မိဖုရားကား " မောင်တော်ဘုရားမှာ ငါ၏ ကျေးဇူးရှိလျှင် ကိုယ်တိုင် ကြွလာလိမ့်မည်. . . ထိုအခါကျမှ အားရအောင် ရှိခိုးမည်ဟု " ပြောဆိုက မထွက်လာဘဲ နေလေသည်. .
ထိုအခါ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ကြွတော်မမူလျှင် ပူပန်အားသဲ၍ ယသော်ဓရာ ရင်ကွဲမည်ကို သိမြင်တော်မူသောကြောင့် ခမည်းတော်အား သပိတ်ပေး၍ အဂ္ဂသာဝက နှစ်ပါးနှင့် အတူ ယသော်ဓရာ နန်းဆောင် သို့ ကြွတော်မူက ခင်းထားပြီးနေရာ၌ ထိုင်တော်မူလေသည်. . . . ထိုအခါ ယသော်ဓရာသည် ကပျာကယာလာ၍ ခြေဖမျက်တော် နှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ပွေ့ပြီးလျှင် မျက်နှာ ဦးခေါင်းကို ခြေဖမိုးပေါ်မျာ လှိမ့်ကာ လှိမ့်ကာ အားရအောင် ကန်တော့ရှာလေသည်. .
YASODHARA REVERENCING THE BUDDHA BY PLACING HER HEAD UPON HIS FEET
The day after his arrival at Kapilavatthu the Buddha went on his alms round. King Suddhodana came and conducted him to the palace and served him with food. After the meal, there was great excitement in the palace and all but Princess Ysodhara came to pay their reverence to the Buddha. Yasodhara thought " Certainly if there is any virtue in m, the Nobel Lord Himself will come to my presence. Then will I reverence him as much as I like".
The Buddha saw that if he did not visit her, Yasodhara would break her heart with grief. So he handed his bowl to the King, and accompanied by his two chief disciples entered the chamber of Yasodhara and sat on the prepared seat, saying, " Let the King daughter reverence as she likes". Swiftly she came, clasped his came, clasped his ankles and placing her heard on his feet, reverenced him as she like.
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, March 06, 20126comments:
ဘုရားခြေတော်ရင်းကို ဦးခေါင်းဖြင့်ပွတ်တိုက်၍ ယသော်...